RW Rooble oo qaabilsay Musharixii labaad, kulan xasaasi ah oo dhex-maray - Awdinle Online
RW Rooble oo qaabilsay Musharixii labaad, kulan xasaasi ah oo dhex-maray
Ra’iisul Wasaaraha xukumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo sii wada kulammada uu la yeelanayo siyaasiniinta dalka, ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Hoggaamiyaha Xisbiga Gurmad Dr.Cabdinaasir Cabdulle Maxamed.
Kulanka ayaa labada Mas’uul waaxaa ay uga wada hadleen xallinta tabashooyinka arrimaha doorashada iyo dhowrista xasilloonida dalka, sida lagu sheegay war kasoo baxay xafiiska Ra’iisul Wasaraha.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa shalay gelinkii dambe Madaxtooyada ku qaabilay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo kamid ah xubnaha Midowga Musharixiinta, waxaana ay ka wada hadleen tabashada la xiriira dhanka doorashada iyo sidii loo xalin lahaa.
Maalmaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in Ra’iisul Wasaaraha xukumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu la kulmo Musharixiinta Madaxweynaha ee tabashada ka qaba arrimaha doorashooyinka si xal loo gaaro.
Previous articleJubbaland oo shir xasaasi ah ka yeelatay xaaladda dalka
Next articleCumar Filish oo digniin kama dambeys ah u diray Shacabka Muqdisho